उपनिर्वाचनमा प्रदेश राजधानी मुख्य मुद्दा, जोगिएला नेकपाको साख ?
बुटवल – आगामी मंसिरमा उपनिर्वाचन गर्ने गरी निर्वाचन आयोगले मिति तय गरेको छ । प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका रिक्त ५० स्थानका लागि उपनिर्वाचन गर्न लागिएको हो ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शंकरप्रसाद खरेलले मंसिर १४ गते रिक्त प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको एकसाथ निर्वाचन हुने लोकान्तरलाई बताए ।
‘३६ जिल्लामा उपमहानगरपालिका प्रमुख १, गाउँपालिका प्रमुख ३, गाउँपालिका उपाध्यक्ष १, गाउँपालिका तथा नगरपालिका वडा अध्यक्ष ४१, प्रदेशसभा सदस्य ३ र प्रतिनिधिसभा सदस्य १ गरी कूल ५० पदको लागि उपनिर्वाचन हुँदैछ,’ उनले भने ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ बमोजिम स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको मिति निर्वाचन आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकार र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ बमोजिम प्रदेशसभा सदस्यको उपनिर्वाचन मिति राजनीतिक दल र सम्बद्ध सरोकारवालासँग छलफल गरी तय गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा/प्रदेश सभामा कहाँ–कहाँ हुँदैन उपनिर्वाचन ?
कास्की क्षेत्र नम्बर २ मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदैछ । त्यहाँबाट निर्वाचित पूर्व संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि निर्वाचन हुन लागेको हो ।
बाग्लुङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ (ख) मा पनि निर्वाचन हुँदैछ । बाग्लुङबाट निर्वाचित राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद टेकबहादुर घर्तीको उपचारको क्रममा गएको मंसिरमा भारतको नयाँ दिल्लीमा निधन भएको थियो ।
भक्तपुर क्षेत्र नम्बर १ को (ख) मा पनि निर्वाचन हुँदैछ । उक्त क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद हरिशरण लामिछानेको गएको वैशाखमा निधन भएको थियो । तत्कालीन नेकपा एमालेबाट निर्वाचित सांसद लामिछानेको उपचारको क्रममा काठमाडौंमा निधन भएको थियो ।
दाङ क्षेत्र नम्बर ३(ख) मा पनि निर्वाचन हुँदैछ । प्रदेशसभा सांसद उत्तरकुमार ओलीको सवारी दुर्घटनामा परी निधन भएपछि निर्वाचन हुन लागेको हो । उनी तत्कालीन नेकपा एमालेबाट निर्वाचित सांसद थिए ।
प्रदेश ५ मा कहाँ–कहाँ हुँदैछ उपनिर्वाचन ?
प्रदेश ५ का ७ जिल्लामा उपनिर्वाचन हुन लागेको छ । १ प्रदेशसभा सदस्य र ८ वडाध्यक्ष पद रिक्त छन् । दाङको क्षेत्र नम्बर ३(ख) मा प्रदेशसभा, गुल्मीको रूरू गाउँपालिका वडा नम्बर ६, अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिका वडा नम्बर ३, प्यूठान नगरपालिका वडा नम्बर २, प्यूठानकै ऐरावती गाउँपालिका वडा नम्बर १ र २, रोल्पाको थवाङ गाउँपालिका वडा नम्बर १ र कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका वडा नम्बर १०, दाङ घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १६, बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर ६ मा उपनिर्वाचन हुँदैछ ।
उपनिर्वाचनमा मुख्यमन्त्रीको गृहजिल्लामा जोगाएला नेकपाले साख ?
उपनिर्वाचनको मिति तय भएसँग दाङमा निर्वाचनको सरगर्मी शुरू भएको छ । जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दलले मंसिर १४ गते २ पदका लागि हुने उपनिर्वाचनको लागि चुनावी कसरत शुरू गरेका छन् । राजनीतिक दलमा उम्मेदवारका आकांक्षीको नाम सार्वजनिक हुने क्रम बढेको छ ।
गएको निर्वाचनमा वलीले कांग्रेसका उम्मेदवार बुद्धिराम भण्डारीलाई पराजित गरेका थिए । वलीले २३ हजार ९ सय ७० मत प्राप्त गरेका थिए भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका बुद्धिराम भण्डारीले १७ हजार ५ सय ३६ मत पाएका थिए ।
नेकपा, कांग्रेस, राप्रपा, समाजवादीलगायत दलले उपनिर्वाचनको लागि सक्रियता बढाएका छन् । विशेष गरी ठूला २ दल नेकपा र कांग्रेसमा उम्मेदवारका आकांक्षी धेरै देखिएका छन् । नेकपाको तर्फबाट स्व. ओलीकी पत्नी विमला ओली, पुराना नेता शोभाराम बस्नेत, देवराज गिरी, हुकुम बस्नेत लगायतको नाम उम्मेदवारका लागि चर्चामा छ ।
नेकपा दाङका सभापति टीकाराम कँडेलले आफूहरू निर्वाचनको तयारी जुटेको बताए । ‘उत्तरकुमारको परिवार पनि निर्वाचनमा उठ्ने मनस्थिति देखाउनुभएको छ,’ कँडेलले भने, ‘हाम्रो चुनावी मुद्दा हो दाङ प्रदेशको राजधानी बन्नुपर्छ । हाम्रा मुख्यमन्त्रीले त्यो माग पूरा गर्नुपर्छ । दाङ राजधानी मुख्य चुनावी मुद्दा बन्नेछ ।’
कांग्रेसमा पनि आकांक्षीको पनि सूची लामो छ । कांग्रेस क्षेत्र नम्बर ४ का सभापति जगतबहादुर खड्का, महासमिति सदस्य खीमप्रसाद खराल, केशव आचार्य, जिल्ला सचिव शंकर डाँगी, टिका घर्ती, सुरेश हमाल, मदन रसिक, किरण शाह, गोविन्दबहादुर शाह आकांक्षी रहेको बताइन्छ । यद्यपि दुवै पार्टीले उम्मेदवारका बारेमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।
दाङमा हुने २ पदको निर्वाचनका लागि ३४ वटा मतदानस्थल तोकिएको छ । उपनिर्वाचन हुने प्रदेशसभा सदस्य ३(ख) मा ७० हजार ७ सय ८९ जनाले मतदात नामावली दर्ता गराएका छन् । घोराही उपमहानगर–१६ मा ४५ हजार ७१ जनाले मतदाता नामावली दर्ता गराएका छन् । कांग्रेस दाङका सभापति कृतिबहादुर खड्काले यस पटकको उपनिर्वाचन कांग्रेसले जित्ने दाबी गरे ।
‘अहिलेको दुईतिहाइको संघ र प्रदेशको सरकारले केही गर्न सकेन । दाङ प्रदेशका राजधानी बन्ने समेत सकेको छैन । दाङ राजधानी आवश्यक छ,’ खड्काले भने, ‘गएको निर्वाचनमा हाम्रो मत अन्तर कम छ । जनता सरकारबाट सन्तुष्ट छैनन् । हाम्रो पक्षमा माहोल बन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।’
चुनावको विषयमा छलफल र बहस शुरू भएको जानकारी दिँदै उनले समयमै उम्मेदवार सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिए । ‘हामी औपचारिक अनौपचारिक छलफलमा जटेका छौं,’ उनले भने, ‘मिति घोषणासँग चुनावी सरगर्मी बढेको छ ।’
नेकपाका प्रदेश सचिव जगप्रसाद शर्माले नेकपा निर्वाचन र पार्टी एकताका क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेको बताए । अहिले एकताको क्रियाकलाप बढाएको र निर्वाचन त्यसैसँगै जोडिएको उनको भनाइ छ । उम्मेदवारका आकांक्षीले भने पार्टीको आधिकारिक धारणा आएपछि मात्रै बोल्ने र निर्णयलाई मान्ने प्रतिक्रिया दिने गरेका छन् ।
२०७६ सालको उपनिर्वाचनमा झण्डै ५ लाख मतदाताले निर्वाचनमा भाग लिनेछन् । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता खरेल उपनिर्वाचनमा ४६ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, १५४ वडामा निर्वाचन हुने बताए । ‘गएको निर्वाचनमा अहिले उपनिर्वाचन हुने क्षेत्रमा ४ लाख ३० हजार मतदाता थिए । अहिले मतदाता नामावली अध्यावधिक गर्दा झण्डै ५० हजार थप हुने हाम्रो अनुमान छ,’ उनले भने ।